Shirkii Hoggaamiyeyaasha Qaaradda Afrika oo lagu soo gaba gabeeyay Johannesburg (Sawirro) – dulmidiid
August 26, 2017 Warka No comments
Shirkii Hoggaamiyeyaasha Qaaradda Afrika oo lagu soo gaba gabeeyay Johannesburg (Sawirro)
Kulanka Madasha Hoggaamiyeyaasha Qaaradda Africa oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Johannesburg ee dalka Koofur Afrika ayaa la soo gaba gabeeyay.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynayaal hore, aqoonyahano iyo siyaasiyiin, waxaana shirka ay kaga doodeen qodobo la xariira kaalinta Africa ay ka qaadan karto nabadeynta caalamka intiisa kale iyo sidoo kale dhalinyarada Qaarada Africa in loo diyaariyo mustaqbalka hoggaanka Qaarada waxna ay ka bartaan hogaamiyaashii hore.
Hoggaamiyeyaasha waxaa ay aad ugu faaloodeen arimo la xariira kaalinta ay africa ka qaadan karaan nabadeynta caalamka intiisa kale waxaana aad loo lafa guray hanaanka dalalka Africa ay ula dagaalameen kooxaha argagaxisada ah ee dhibaatada ku haaya caalamka intiisa kale .
Waxaa sido kale kulanka qeybtiisa labaad lagu lafa guray qaabka dhalinyarada Africa loogu diyaarin karo la wareegida hogaanka mustaqbalka qaarada ayada oo dhalinyarada ay su’aalo ay waydiinayeen madaxweynayaasha kulanka kasoo qeybgalay.
Xasan Sheikh Maxamuud Madaxweynahii hore ee Soomaaliya oo la dardaaramayay dhalinyarada qaarada Africa ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay la yimaadaan qorshe cad oo ku aadan dhibaatada heysta iyo xalka looga bixi karo arintaasi.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay dhainyarada Soomaalida in qorshe cad ay ula yimaadeen dowladiisa intii uu xilka haayay, isagna uu siiyay fursadii ay raadinayeen, taasna ay keentay in isfahan buuxa la helo oo in badan baahida dhalinyarada la daboolay.
Waxaa uu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay In Hogaamiyaasha qaarada Africa ay diyaar u yihiin in ay wax la qabtaan dhalinyarada meel walba oo ay joogaan.
Kulanka ayaa waxaa sanad walba qabta Madaxweynahii hore ee dalka Tanzania iyo Madaxweynahii hore ee South Africa, waaana markii ugu horeysay oo kulankaan lagu qabto South Africa.